मदन लम्साल Articles 90
हिजोआज हाम्रा प्रधानमन्त्री एकदमै दुःखी र लज्जित हुनुहुन्छ रे । किन रे भन्दा आफ्नै सरकारका मन्त्री र सचिवहरूले उहाँलाई पटक पटक ढाँटे रे । अनि मिशन पत्रकारिताले पनि उहाँलाई नै पेल्यो रे । यो त स्व. गोपाल मैनाली ‘फिस्टे’ले खेलेको एउटा विज्ञापनमा ‘गाईले पनि तिमीलाई लखेट्ने, कुखुराले पनि तिमीलाई नै लखेट्ने…’ भनेजस्तो भइरहेको देखिन्छ । यो त अति भयो । आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई यसरी मनलागी पेल्न पाइन्छ र भन्या ? प्रम भएयता यति धेरै जोक, ठट्टा गरिहिँड...	बिस्तृतमा
नेता एक खास प्रकारका स्तनधारी मनुष्यजस्तै दुई खुट्टा, दुई हात भएका र ठाडो उभिने प्राणी हुन्, जो देशका हरेक कुना–काप्चासम्म पाइन्छन् । तिनका अनुहार मानिसहरूसँग ठ्याक्कै मिल्छ । तिनलाई जनताको टाउकोमा चढ्न र सभा, गोष्ठीहरूको मैदानमा दौडन साह्रै मन पर्छ । उनीहरू देशमै रहेका बेला गर्मीमा प्रायः पहाड नभए केन्द्रीय राजधानी नेपाल खाल्टोतिर र जाडोमा तराईतिर विचरण गरिरहेका भेटिन्छन् । यिनीहरूको खुट्टाचैं हुन्छ, तर प्रायः हिँड्नै सक्तैनन् । त्यसैले यिनीहरू...	बिस्तृतमा
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजयूको सम्मानमा केही आदरभाव झल्किने शब्दहरू यहाँ जोड्ने प्रयासमा छु । किनकि आदरणीय, पूजनीय, अनन्त श्रीयुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले अघिल्लो हप्ता मात्रै नेपाली मिडियाले आदरार्थी शब्दहरू बिर्सिएकोमा सम्झाइबक्सेको थियो । त्यस्तै उहाँले बेलाबेलामा मिडिया र विपक्षीले सरकारको प्रशंसा गरेनन् भनेर पनि भन्ने गरिबक्सेको छ । यो कुरा सोह्रै आना अर्थात् शतप्रतिशत ठीक हो । हुन पनि प्रशंसा गरेको कसलाई मन पर्दैन र ? यो त सबैलाई...	बिस्तृतमा
आमा, भोक लाग्यो ! पख छोरी, तिम्रो बाउ अन्न फलाउन बीउ र मल किन्न शहर गा’छन् । आमा, तिर्खा लाग्यो । पख बा, मेलम्ची खोला आउँदै छ । आमा, यत्ति धेरै दूध दुह्यौ, तकारी फलायौ । अब कल्ले किन्छ त ? छोरी, अब आफै खाने । खान नसकेको दूधले सडक पखाल्ने । तरकारी भैंसीलाई खुवाउने । आमा, उखु पनि बेचिनौं त ? दाउरा बालेको देखिनौं ? आमा, दाई विदेश गाथे । अब बाबा पनि जाने भए । खेती कल्ले गर्ने ? खेत बाँझै राख्ने छोरी । जग्गा त्यसै राखे सर्खारले कारबाही गर्छ रे नि त ?...	बिस्तृतमा
एक/दुईबाहेक नेपालमा चलेका ‘टीभी रियालिटी शो’ त्यति राम्रा, स्तरीय विषयवस्तु भएनन् भन्ने जनगुनासा धेरै सुनिन थालेको छ । प्रयास गर्‍यो भने कतै आफै पो एउटा खतरा कार्यक्रम बनाऊँ कि जस्तो लागेको छ । विषयवस्तु के हुन सक्छ भनेर गम खाँदै जाँदा एउटा गज्जबको कुरा फुरेको छ, जुन यस्तो छ :– अहिले नेपाली विद्युतीय पर्दामा प्रायः मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम धेरै छन् । ज्ञानप्रधान कार्यक्रम छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । यस्तो ज्ञान, जसले हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा पनि काम आ...	बिस्तृतमा
छिटै बजारमा आउन लागेको एक मिडिया हाउसका लागि उदीयमान पत्रकारहरूको तुरुन्त आवश्यकता छ । यो मिडियामा नेपालका राजनीतिमा लागेर रातारात धनी बन्न सफलहरू, केही सुन व्यापारी, जग्गा व्यवसायी र खासगरी अहिलेका जल्दाबल्दा नेताहरूको विशेष लगानी छ । (त्यसकारण यो मिडिया अन्य कथित मिडिया हाउसहरू जस्तो आज खुल्ने र केही समयपछि बन्द हुने खालको होइन) । त्यसैले माथि उल्लिखित लगानीकर्ताका भनसुनबाट आएका उम्मेदवारहरूलाई विशेष ग्राह्यता दिइनेछ । लगानीकर्ताका नाम यहाँ उल्...	बिस्तृतमा
नेपालमा गोयबल्सका पनि गुरू जन्मिइसकेका छन् । गोयबल्स अर्थात् हिटलरका सबैभन्दा प्रिय पात्र र सन् १९३३ देखि १९४५ सम्म नाजी सरकारका प्रोपोगाण्डा मन्त्री उनै पउल जोसेफ गोयबल्स । उनको प्रचारशैली त विश्वप्रसिद्ध नै छ, जो कालोलाई सेतो र झूठलाई सत्य प्रतीत गराउन हरदम सफल रहन्थ्यो । तर, गोयबल्सलाई पनि माथ गर्ने प्रोपोगाण्डा अर्थात् अतिप्रचारमन्त्री मन्त्री नेपालले पनि पाएको छ जसले औंशीलाई पनि पूर्णिमाको रात भनिरहन्छ । भलै यिनले बोल्ने कुराहरू यिनको मात्र...	बिस्तृतमा
हाम्रो देशको माटोमा गणतन्त्रको युरिया पर्‍या मात्र के थ्यो, यी तीन चीज खूब फुल्न थाल्या छन्– दलाल, गुन्डा र नेता । कतिपयले रूपमा यी तीन भाइ फरक देखिए पनि सारमा एकै हो भन्छन् । अर्थात् यी तीन नाममध्ये जे भने पनि सारमा एउटै हो भन्ने बुझिन्छ । जस्तै– हाम्रै गाउँका अन्तरे पहिले एउटा सामान्यस्तरका स्थानीय गुन्डा थिए, जो जग्गा दलाली गरेर गुजारा चलाइरहेका थिए । तर गणतन्त्र आएपछि आफ्नो प्रतिभाले उनी मध्यम कोटिको दलाल हुँदै जिल्लास्तरका उत्तम कोटिकै नेता...	बिस्तृतमा
‘अब सडकमा जहाज बस्छन् । टुँडिखेलमा तरकारी रोपिन्छ । पहिले पोखरीहरू फुटबल ग्राउन्ड बन्नेवाला थे । अब फेरि पोखरीमा परिणत हुन्छन् । आइन्दा जिंग्रिङ्ग भएर सडकमा मान्छे बस्दैन । कोही भोकै वा धूलो खाएर मर्दैन ।’ यो कुनै जोक वा यो पंक्तिकारले सपना देखेर लेखेको होइन । यी कुराहरू त ‘मेरो सरकार’ले २०७६/७७ का लागि सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम पढेपछि बुझेका केही अंश मात्र हुन् । सरकारले ल्याएका यी नीति तथा कार्यक्रम यति क्रान्तिकारी छन् कि, यो पढे भने सं...	बिस्तृतमा
ककल्ले हो बालुवाटारको जग्गा खाए रे । अर्काथरीले खुलामञ्च र टुँडिखेल नि भ्याए रे । हरेक दिन, हरेक हप्ता पार्टीका नेता, सरकारी पदाधिकारी, व्यापारी आदिले खाएका र भ्याएका यस्तै झिनामसिना कुरा गरेर नेपाली मिडिया अलमलिइरहेको छ । बल्ल बल्ल बनेको स्थिर सरकार देशमा समृद्धि ल्याउने ठूलो लक्ष्य लिएर हिँडिरहेको बेला यस्ता सानातिना कुरामा मानिसहरू किन अल्झिरहेका छन् कुन्नि ! गरीब नहुने हो भने राष्ट्रिय योजना आयोग, गरीबी निवारण कोष, सुकुमबासी आयोग जस्ता दर्जनौ...	बिस्तृतमा